Ny fanavaozana ny WhatsApp dia manampy fiasa 3D Touch bebe kokoa | Vaovao IPhone
vaovao Fanavaozana ny WhatsApp izay manamarina ny hafainganana azon'izy ireo hatramin'ny namarotana ny iPhone 6s sy ny iPhone 6s Plus. Ny kinova WhatsApp vaovao dia ny kinova 2.12.12 ary, toy ny mahazatra amin'ny fanavaozam-baovao farany, dia toa te hiara-milalao amintsika izy ireo raha hahalala hoe inona no vaovao hampidirina ao amin'ity kinova vaovao ity, satria ny lisitry ny fanovana, izay anananao aorian'ny fanapahana azy dia mitovy tanteraka amin'ilay nampidirin'izy ireo tao 2.12.11 version, kinova navoaka vao roa herinandro lasa izay, ka tsy azontsika fantarina tsara izay tafiditra ao amin'ity kinova vaovao ity.
Inona no vaovao ao amin'ny WhatsApp 2.12.12
Topazo maso ireo rohy alefanao sy azonao. Rehefa mandefa rohy ianao dia manana safidy hampiditra na tsy hampiditra ilay topi-maso.
Seho 3D Touch misimisy kokoa: Misy fihetsika Peek sy Pop azo jerena ao anaty chat.
Pejy fanovana nohavaozina.
Azonao atao ny mijery ny hafatra misy kintana rehetra ao amin'ny Settings - hafatra misy kintana.
Ireo izay manana a Apple Watch azonao atao ny manandramana raha toa ka mifanaraka amin'ny famantaranandronao marani-tsaina io fanavaozana io, araka ny nandrasan'ny beta farany. Ankoatr'izay, azontsika atao koa ny manamarina raha mahavita mampangina ny fifandraisana ao anaty vondrona, zavatra mbola tsy nandramako ary tsy fantatro raha ilay safidy hiteny am-bava izay hitako rehefa niditra profil iray tamina vondrona iray dia nisy teo aloha na tsia.
Noho izany, tsy maintsy manohy milalao amin'ny WhatsApp Inc. isika hahafantarana ny vaovao entin'ity kinova vaovao ity. Misy ihany koa ny mety, na dia tsy manantena aho aza, fa ity fanitsiana ity dia misy fanitsiana kely fotsiny. Aza misalasala miala amin'ny fanehoan-kevitra raha mahita vaovao hafa noho ireo voalaza amin'ity lahatsoratra ity ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny fanavaozana WhatsApp vaovao dia manampy fiasa 3D Touch bebe kokoa
Keterr dia hoy izy:
Na ny mifanentana amin'ny Apple Watch, na ny fifandraisana tsy miteny ao anaty vondrona ...
Mamaly an'i Keterr
Raha azo atao muted tsirairay ny fifandraisana, ampidirinao ny mombamomba ny fifandraisana ary misy ny safidy mametraka fahanginana. Miaraka amin'ny Apple Watch dia mbola tsy mifanaraka io
Eny, azonao atao ny mampangina ny fifandraisana ao anaty vondrona araka ny nasehon'i Juan Fco Carretero
Fa ny zavatra momba ny Watch. Tsy misy mihitsy.
Fantatrao fa ny iOS9.2 dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy rahampitso lol
ARY NY JAILY…. hehehehe
Nahita iray aho! Raha tsindrio ny sarin'ny fifandraisana na vondrona iray dia azonao atao ny mijery azy ary manana safidy koa ianao hitahiry ilay sary na handika azy. Fiarahabana avy any Arzantina!
Fa raha ireo fiasa ireo dia efa ...
mitoba dia hoy izy:
Rehefa mamitaka antsika izy ireo dia tsy manana zava-baovao, ireo fiasa ireo dia efa tao amin'ny kinova taloha.
Mamaly an'i mitoba